.အရပွေားအနာ၊ နှငျးခူ၊ ဝကျခွံ၊ သနျကောငျ၊ မီးလောငျဒဏျရာ တို့အတှကျ တမာရှကျ ရဲ့ ထူးခွားအာနိသငျ. – Askstyle
.အရပွေားအနာ၊ နှငျးခူ၊ ဝကျခွံ၊ သနျကောငျ၊ မီးလောငျဒဏျရာ တို့အတှကျ တမာရှကျ ရဲ့ ထူးခွားအာနိသငျ.
ဆောင်းတွင်းမှာ အသီးအရွက်တွေ ပေါများတဲ့ ရာသီဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒီလို အချိန်မှာ ခရမ်းချဉ်သီး ငပိချက်နဲ့ တွဲပြီး စားတတ်ကြတာကတော့ တမာ ချဉ်ပါပဲ။ တမာရွက်ပြုတ်၊ တမာရွက်အချဉ်ဟာ ခါးပေမယ့် ခံတွင်းမြိန်စေတဲ့ အရွက်တစ်မျိုးပါ။ သူ့မှာ ရှိတဲ့ အခြား အာနိသင်တွေကိုလည်း ပြန်ပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
(၁) ပိုးသတ်အာနိသင်ရှိပါတယ်တမာရွက်မှာ ဘက်တီးရီးယား၊ ကပ် ပါးကောင်၊ ဖန်းဂပ်စ်မှို၊ ပရိုတိုဇွနဲ့ ဗိုင်း ရပ်စ်တွေကို ဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့ ပိုးသတ်အာ နိသင်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနာ ပေါက်နေချိန်မှာ တမာရွက်ကို ပြုတ်ပြီး တို့စားတာ၊ တမာရွက်ကို ကျိုပြီး ရလာ တဲ့ ရေနဲ့ အနာကို ဖန်ရည်ဆေးတာတွေ ပြုလုပ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ ပိုးမွှား တွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အရေပြား ယားယံ နေရင် တမာရွက်ပြုတ်ရည်နဲ့ ရေချိုးလိုက် ပါ။ တမာရွက်ရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင် ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ ပိုး မွှားတွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။
(၃) ပြတ်ရှရာနဲ့ အနာတွေကို အမြန် သက်သာစေပါတယ်
သင့်အရေပြားမှာ ပြတ်ရှရာ ဒါမှမ ဟုတ် အနာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေရင် တမာ ဆီကိုလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာနဲ့ အ နာတွေမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ ပိုးမွှားမှန်သမျှ တွန်းလှန်ပေးပြီး အနာကျက်မြန်စေပါ တယ်။
(၄) အရေပြားအနာတွေအတွက် ဆေး စွမ်းကောင်းပါ
နှင်းခူ၊ ဝက်ခြံ၊ အရေပြားဓာတ်မ တည့်တာ၊ အရေပြားမှာ အနီကွက်ပေါ် တာ၊ အရေပြားမှာ ယားနာပေါက်တာ စတဲ့ အရေပြားဝေဒနာအားလုံး အမြန် သက်သာစေဖို့ တမာဆီ ဒါမှမဟုတ် တမာ ရွက်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပေါင်ဒါမှုန့်ကို အသုံး ပြုပေးပါ။
(၅) မီးလောင်ဒဏ်ရာကို အမြန်သက် သာစေပါတယ်
မီးလောင်တာကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ကုသရာမှာ တမာရွက် ထည့်ကျိုထားတဲ့ တမာရေကို လိမ်းပေး ပါ။ အရေပြားကို အနာအမြန်ကျက်စေ ပြီး ပိုးမဝင်အောင်နဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုမဖြစ် အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၆) ဆံပင်သား ကျန်းမာစေပါတယ်
တခြားဆံပင်လိမ်းဆီအစား ဆံပင် မှာ တမာဆီကို လိမ်းပေးရင် ဆံပင်မဖြူ အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ဗောက်ထ တာ၊ သန်းရှိတာနဲ့ ဆံပင်ကျွတ်တာတွေ ကို သက်သာလျော့ပါးစေပါတယ်။
(၇) ကြွက်သားနဲ့ အဆစ်တွေ နာကျင်မှု ကို သက်သာစေပါတယ်
တမာဆီကို နာကျင်နေတဲ့ ကြွက် သားနဲ့ အဆစ်နေရာတွေမှာ လိမ်းပြီး နှိပ် ပေးရင် ရိုးဆစ်ရောင်ရမ်းနာ၊ ဂေါက်အ ဆစ်ရောင်နာ၊ ခါးနာတာစတဲ့ နာကျင်မှု ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
(၈) အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေ ပါတယ်
တမာရွက်ကို ပြုတ်ပြီး စားပေးရင် အရသာခံအာရုံ မကောင်းတာကို သက် သာစေပြီး ဝမ်းချုပ်တာနဲ့ အစာမကြေ တာကို သက်သာစေပါတယ်။ ရင်ပူမှုမ ဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ တယ်။
(၉) သန်ကောင်တွေကို ကင်းစင်စေပါ တယ်
တမာရွက်ကို ပြုတ်ပြီး စားတာက သန်ကောင်တွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ တမာရွက်မှာ သန် ကောင်တွေကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်တဲ့ အ စွမ်းရှိပြီး အူလမ်းကြောင်းရဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေကို ကျန်းမာစေလို့ပါ။
တမာရွက်ကို ပုံမှန်စားပေးရင် သွေး သန့်စင်စေပါတယ်။ တမာရွက်ဟာ သွေး ထဲက အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှား ပေးတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောဂါ ကင်းစေပါတယ်။
(၁၁) သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို ထိန်း ပေးနိုင်ပါတယ်
တမာရွက်ကို ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ရှိသူတွေအတွက် ထိရောက်တဲ့ ဆေးတစ် လက်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အကြောင်းက တော့ တမာရွက်ဟာ သွေးတွင်းသကြား ဓာတ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းပေးနိုင်လို့ ပါ။
(၁၂) ခုခံစွမ်းအားစနစ်ကို ကောင်းမွန် စေပါတယ်
တမာရွက်ကို စားပေးရင် ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို သန်စွမ်း ကောင်းမွန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အားနည်း စေတဲ့ ပြင်ပရောဂါတွေကိုလည်း အတိုင်း အတာတစ်ခုအထိ တွန်းလှန်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
Credit: Good Health, Photo: Fotolia
ဆောငျးတှငျးမှာ အသီးအရှကျတှေ ပေါမြားတဲ့ ရာသီဆိုရငျ မမှားပါဘူး။ ဒီလို အခြိနျမှာ ခရမျးခဉျြသီး ငပိခကျြနဲ့ တှဲပွီး စားတတျကွတာကတော့ တမာ ခဉျြပါပဲ။ တမာရှကျပွုတျ၊ တမာရှကျအခဉျြဟာ ခါးပမေယျ့ ခံတှငျးမွိနျစတေဲ့ အရှကျတဈမြိုးပါ။ သူ့မှာ ရှိတဲ့ အခွား အာနိသငျတှကေိုလညျး ပွနျပွီး မြှဝလေိုကျပါတယျ။
(၁) ပိုးသတျအာနိသငျရှိပါတယျတမာရှကျမှာ ဘကျတီးရီးယား၊ ကပျ ပါးကောငျ၊ ဖနျးဂပျဈမှို၊ ပရိုတိုဇှနဲ့ ဗိုငျး ရပျဈတှကေို ဆနျ့ကငျြနိုငျတဲ့ ပိုးသတျအာ နိသငျတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အနာ ပေါကျနခြေိနျမှာ တမာရှကျကို ပွုတျပွီး တို့စားတာ၊ တမာရှကျကို ကြိုပွီး ရလာ တဲ့ ရနေဲ့ အနာကို ဖနျရညျဆေးတာတှေ ပွုလုပျကွတာ ဖွဈပါတယျ။
(၂) ခန်ဓာကိုယျမှာ ကပျငွိနတေဲ့ ပိုးမှား တှကေို သစေနေိုငျပါတယျသငျ့ခန်ဓာကိုယျအရပွေား ယားယံ နရေငျ တမာရှကျပွုတျရညျနဲ့ ရခြေိုးလိုကျ ပါ။ တမာရှကျရဲ့ ဆေးဖကျဝငျအာနိသငျ ကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ ကပျငွိနတေဲ့ ပိုး မှားတှကေို ကငျးစငျစပေါတယျ။
(၃) ပွတျရှရာနဲ့ အနာတှကေို အမွနျ သကျသာစပေါတယျ
သငျ့အရပွေားမှာ ပွတျရှရာ ဒါမှမ ဟုတျ အနာတှေ ဖွဈပျေါနရေငျ တမာ ဆီကိုလိမျးပေးနိုငျပါတယျ။ ဒဏျရာနဲ့ အ နာတှမှော ကပျငွိနတေဲ့ ပိုးမှားမှနျသမြှ တှနျးလှနျပေးပွီး အနာကကျြမွနျစပေါ တယျ။
(၄) အရပွေားအနာတှအေတှကျ ဆေး စှမျးကောငျးပါ
နှငျးခူ၊ ဝကျခွံ၊ အရပွေားဓာတျမ တညျ့တာ၊ အရပွေားမှာ အနီကှကျပျေါ တာ၊ အရပွေားမှာ ယားနာပေါကျတာ စတဲ့ အရပွေားဝဒေနာအားလုံး အမွနျ သကျသာစဖေို့ တမာဆီ ဒါမှမဟုတျ တမာ ရှကျနဲ့ လုပျထားတဲ့ ပေါငျဒါမှုနျ့ကို အသုံး ပွုပေးပါ။
(၅) မီးလောငျဒဏျရာကို အမွနျသကျ သာစပေါတယျ
မီးလောငျတာကွောငျ့ ဖွဈလာတဲ့ ဒဏျရာတှကေို ကုသရာမှာ တမာရှကျ ထညျ့ကြိုထားတဲ့ တမာရကေို လိမျးပေး ပါ။ အရပွေားကို အနာအမွနျကကျြစေ ပွီး ပိုးမဝငျအောငျနဲ့ ဓာတျမတညျ့မှုမဖွဈ အောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
(၆) ဆံပငျသား ကနျြးမာစပေါတယျ
တခွားဆံပငျလိမျးဆီအစား ဆံပငျ မှာ တမာဆီကို လိမျးပေးရငျ ဆံပငျမဖွူ အောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပွီး ဗောကျထ တာ၊ သနျးရှိတာနဲ့ ဆံပငျကြှတျတာတှေ ကို သကျသာလြော့ပါးစပေါတယျ။
(၇) ကွှကျသားနဲ့ အဆဈတှေ နာကငျြမှု ကို သကျသာစပေါတယျ
တမာဆီကို နာကငျြနတေဲ့ ကွှကျ သားနဲ့ အဆဈနရောတှမှော လိမျးပွီး နှိပျ ပေးရငျ ရိုးဆဈရောငျရမျးနာ၊ ဂေါကျအ ဆဈရောငျနာ၊ ခါးနာတာစတဲ့ နာကငျြမှု ဝဒေနာတှကေို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
(၈) အစာခွစေနဈကို ကောငျးမှနျစေ ပါတယျ
တမာရှကျကို ပွုတျပွီး စားပေးရငျ အရသာခံအာရုံ မကောငျးတာကို သကျ သာစပွေီး ဝမျးခြုပျတာနဲ့ အစာမကွေ တာကို သကျသာစပေါတယျ။ ရငျပူမှုမ ဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါ တယျ။
(၉) သနျကောငျတှကေို ကငျးစငျစပေါ တယျ
တမာရှကျကို ပွုတျပွီး စားတာက သနျကောငျတှကေို ကငျးစငျစပေါတယျ။ အကွောငျးကတော့ တမာရှကျမှာ သနျ ကောငျတှကေို တှနျးလှနျပေးနိုငျတဲ့ အ စှမျးရှိပွီး အူလမျးကွောငျးရဲ့ လုပျငနျး ဆောငျတာတှကေို ကနျြးမာစလေို့ပါ။
တမာရှကျကို ပုံမှနျစားပေးရငျ သှေး သနျ့စငျစပေါတယျ။ တမာရှကျဟာ သှေး ထဲက အညဈအကွေးတှကေို ဖယျရှား ပေးတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ ရောဂါ ကငျးစပေါတယျ။
(၁၁) သှေးတှငျး သကွားဓာတျကို ထိနျး ပေးနိုငျပါတယျ
တမာရှကျကို ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါ ရှိသူတှအေတှကျ ထိရောကျတဲ့ ဆေးတဈ လကျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ အကွောငျးက တော့ တမာရှကျဟာ သှေးတှငျးသကွား ဓာတျကို ပုံမှနျဖွဈအောငျ ထိနျးပေးနိုငျလို့ ပါ။
(၁၂) ခုခံစှမျးအားစနဈကို ကောငျးမှနျ စပေါတယျ
တမာရှကျကို စားပေးရငျ ခန်ဓာကိုယျ ရဲ့ ကိုယျခံစှမျးအားစနဈကို သနျစှမျး ကောငျးမှနျစပွေီး ခန်ဓာကိုယျကို အားနညျး စတေဲ့ ပွငျပရောဂါတှကေိုလညျး အတိုငျး အတာတဈခုအထိ တှနျးလှနျပေးနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။